श्वेता र धुर्मुस-सुन्तली जस्तो मागेर समाजसेवा पनि हुँदैन – Namaste Host
February 21, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on श्वेता र धुर्मुस-सुन्तली जस्तो मागेर समाजसेवा पनि हुँदैन
आन्दोलनरत नेकपाका नेता रामकुमारी झाँक्री राजनीतिकर्मी मात्र नभएर टिकटक प्रेमी पनि हुन् । उनका टिकटक अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल छन्। उनको राजनीति उचाई पनि त्यतीकै भएको होइन ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उनको योगदान छ । उनी विद्यार्थी राजनीतिको पनि उत्तिकै भूमिका छन् । उनी अखिल विद्यार्थीका नेता पनि हुन् । उनी अनेरास्ववियुको पूर्व अध्यक्ष पनि हुन् ।उनले मागेर गर्ने समाजसेवालाई सेवा नमान्ने बताएकी छन्। मिलिनियरले गर्नुपर्ने काम मागेर गर्नेहरुले गर्न नहुने उनको भनाई छ । नेपालमा मिलेनियर विनोद चौधरीले
गर्नुपर्ने काम अरुसंग मागेर आफु समाजसेवी बन्न पाइदैन उनको भनाई छ । उनले समाजसेवाको परिभाषा बदल्नुपर्ने बताएकी छन् । उनले अरुसंग माग्ने, एम्बेस्सिमा गएर झोला थाप्ने अनि समाजसेवा गरेँ भन्न नमिल्ने बताइन्।
उनलाई धर्मसंकट सेग्मेन्टमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेत्र विक्रम चन्द विप्लवमा, विप्लवलाई छानेकी छन् ।उनले युवा पुस्ता र प्रधानमन्त्रीको कदमको पनि विरोध गरेका कारण विप्लवलाई छानेको बताइन् । तर उनको राजनीतिक विचारको भने आफु विरोधी रहेको भनाई छ ।
एक फरक प्रसंगमा आफुहरुले गरेको विरोध सभामा आफ्ना नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले मञ्चवाटै पत्रकार ऋषी धमलालाई गाली गर्नु राम्रो नभएको बताएकी छन् । उनले धमलाले पनि मुल कार्यक्रमलाई नै प्रभाव पार्नेगरी
गतिविधि गर्न नहुने र नारायणकाजीले पनि त्यसरी पत्रकारलाई इंकित गरेर भाषण गर्दागर्दै हप्काउन नहुने बताएकी छन् । उनले भनिन्, त्यो ढंग नपुगेको हो, त्यसलाई फरक ढंगले हल गर्न सकिन्थ्यो ।
लामो समयपछिको भेटमा पत्नि हिमानीसँग के के कुरा गरे पारसले ?
यि हुन आज आ’गलागी मा परि अ’कल्पनीय नि’धन हुने कलिला मुनाहरूको , पुरै परिवार शो’क मा !
February 1, 2021 Bijay Lama
कोरियामा एक नेपालीले सडकमा भेटेको १३ लाख प्रहरीलाई बुझाए
May 3, 2021 Bijay Lama
दुई लाख ७६ हजार सेवानिवृत्त सेना, प्रहरी, शिक्षक र निजामतीलाई खुसीको खवर ! (प्रेसबिज्ञप्ती)
June 7, 2021 Bijay Lama